I-Android enye: Wazalwa njani kwaye yavela njani | I-Androidsis
I-Android One sele iyinto eqhelekileyo kwintengiso namhlanje. Ukuzalwa kwiminyaka emine edlulileyo, le nguqulo yenkqubo yokusebenza iye yanomdla onomdla. Kuba izicwangciso zokuqala zenkampani zazahluke kakhulu. Kodwa, kule minyaka idlulileyo kuye kwenzeka utshintsho olwenze ukuba lube lolu hlobo.
Inguqulelo enenkxaso yabathengi. I-Android One ibe yintoni namhlanje? Sithetha nawe malunga nale nguqulelo elandelayo Ukuze uyazi ngakumbi malunga nale nguqulo yenkqubo yokusebenza, ethe yafumana ubukho obuninzi kwimarike.
1 Imvelaphi ye-Android One
2 Ngo-2017 no-2018: Utshintsho kunye nempumelelo ye-Android One
Imvelaphi ye-Android One
Xa i-Android ithatha amanyathelo ayo okuqala kwintengiso, UGoogle kwafuneka athethathethane nabavelisi kunye nabaqhubi. Ukusukela oko baqala ngokungalunganga, banyanzelwa ukuba benze umnyinyiva othile. Ke bavumele abavelisi ukuba benze izakhelo zokwenza ngokwezifiso, ukongeza kufakelo bloatware.
Le yayiyinto ethintela iifowuni ukuba zenze ngendlela uGoogle afuna ngayo. Ke, uthathe isigqibo sokwenza i-Android One Inguqulelo yenkqubo eyilelwe iifowuni ezinemali ephantsi, kwiimarike ezisakhulayo, into eyi-Android Go ngoku. Le yayiyinto enesiphumo esihle eTshayina.
Kodwa ngo-2015 inkampani yagqiba ekubeni itshintshe ikhosi yale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Ke kulo nyaka, bavumela umenzi wokuqala wasentshona ukuba avelise kwaye asungule ifowuni ye-Android One. Inkampani yaseSpain iBQ yayiyeyokuqala ekubeni uthe imbeko. Ukucaciswa kwefowuni kwakuxinekile, kodwa yayinethuba lokufumana uhlaziyo ngokukhawuleza.
Kodwa akunakutshiwo ukuba le fowuni, i-Aquaris A4.5, yayiyimpumelelo nokuba. Into enefuthe elikhulu kwinkampani. Kuba u-2016 ibingunyaka apho I-Android One yayingenakubakho kwintengiso. Ngapha koko, zimbini kuphela iimodeli ezikhutshiweyo ezivenkileni zinolu hlobo.
Ngo-2017 no-2018: Utshintsho kunye nempumelelo ye-Android One
U-2017 ibingunyaka wotshintsho olukhulu lwe-Android One. Kuwo wonke lo nyaka, zintathu kuphela iifowuni ezinolu hlobo lwenkqubo yokusebenza ezafika kwintengiso. Kodwa, enye yezi modeli yayijongene notshintsho kunye namandla afunyenwe kule marike. Zeziphi iifowuni esithetha ngazo? Le yiXiaomi Mi A1.
Ukongeza ekubeni linyathelo elibalulekileyo lomenzi waseTshayina, Ishiye notshintsho olubalulekileyo kwi-Android One. Sele isishiyile nezikhokelo zokuba le nguqulo yenkqubo yokusebenza inqwenela ukuba yintoni. Kuba bazishiya iifowuni ezinesiphelo esisezantsi, babheje kwiimodeli ezingcono, phakathi kuluhlu kunye nasekupheleni.
Ezinye izinto ezibalulekileyo zaziswa. Iifowuni eziphezulu, kodwa kunye nemigangatho yeGoogle. Oku bekususela ngoku kwiqhosha le-Android One Ngale ndlela, sifumana inkqubo ecocekileyo, ngaphandle kocingo lomntu okanye ibloatware, kunye neeapps zikaGoogle ezikhethiweyo. Ukongeza, ukubonakala kohlaziyo kuphuculwe. Kuba kuneminyaka emibini yohlaziyo lwenkqubo kunye neminyaka emithathu yezikhuselo.
Ukuba le fowuni yasungulwa ngo-2017, yayiyeyona nto iphambili kwi-Android One, U-2018 lo ngunyaka apho waziseka khona kwintengiso. Kananjalo unyaka ugcwele impumelelo. Kuba sifumana inani elikhulu leemodeli ezinolu hlobo namhlanje. Ngapha koko, iimveliso ezinjengeNokia ziyisebenzisa kuzo zonke iifowuni zazo. Ngokupheleleyo, iifowuni ezintsha ezili-15 zifikelele kwintengiso ezisebenzisa olu hlobo lwenkqubo yokusebenza.
Ezinye zeefowuni ezisungulwe ezivenkileni ngo-2018 nge-Android One njengenkqubo yokusebenza zezi:
Xiaomi yam A2 Lite
I-ZTE Axon 9 Pro
I-BQ Aquaris X2
I-BQ Aquaris X2 Pro
Ngaphandle kwamathandabuzo, indaleko esele ikho ibinomdla kakhulu. Ke kuyakufuneka sibone ukuba basishiyele ntoni ngo-2019, Unyaka apho ukukhula okwenzeka kwi-2018 kufuneka kuqiniswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » I-Android enye: Imvelaphi kunye nokuvela kwale nguqulo yenkqubo yokusebenza
IHuawei P30 ayizukuboniswa kwi-MWC 2019